Mgbe - The saga nke ihe nkiri ịhụ na Amazon Prime | Bezzia
Mgbe: Saga nke ihe nkiri ịhụ na Amazon Prime
Susana godoy | 11/01/2022 14:00 | Akụkọ
Ọ bụrụ na ha amachaghị gị nke ọma, mgbe ahụ ikekwe ị ga-ahụ ohere iji nụ ụtọ otu n'ime saga na-enye ọtụtụ ihe ikwu maka ya. Akpọrọ ya 'Mgbe' ma ọ bụ akụkọ sitere na akwụkwọ akụkọ nke onye edemede Anna Todd dere. Mmekọrịta ndị ntorobịa, ndakpọ olileanya mbụ, ọbụbụenyi na nsogbu ezinụlọ bụ ụfọdụ nhọrọ ndị a na-emetụ n'akụkọ dị otú a.
Ihe nkiri ọ bụla dabere na otu akwụkwọ Todd, ruo ugbu a anyị nwere ihe nkiri atọ nke anọ mezuru ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere akụkọ dị ka nke a, nke ga-adọrọ mmasị gị, mgbe ahụ ị gaghị atụfu ihe niile na-esote n'ihi na ọ masịrị gị nke ukwuu. Ị dịla njikere ma ọ bụ dị njikere maka ya?
1 Mgbe: Ihe niile na-amalite ebe a
2 Mgbe: Na otu puku iberibe
3 Mgbe: Mkpụrụ obi furu efu
Mgbe: Ihe niile na-amalite ebe a
Dị ka anyị tụlere, ruo ugbu a enwere ihe nkiri atọ ị nwere ike ikiri na Amazon Prime. Nke mbụ bụ aha 'Mgbe: Ihe niile na-amalite ebe a'. N'ime ya, anyị na-achọpụta otú ịhụnanya ịhụnanya ntorobịa si nwee ọtụtụ ihe ọ ga-ekwu. Anyị ga-ezute Tessa Young onye na-apụ n'ụlọ ya n'ihi na ọ na-amalite mahadum. Ọ ga-emeta ndị enyi ọhụrụ, nke ọ bụ ezie na nne ya adịghị amasị ha, ọ naghị eche na ọ dịghị ihe ọzọ. Kedu ka ọ ga-esi dị ntakịrị, nwa nwoke na-apụtakwa na ndụ ya. N’ezie, ọ bụrụ na ọ dị ka ihe na-amasị ha abụọ, onye nke atọ na-agbalị imeghe anya ya site n’ịgwa ya na ihe niile dabeere n’egwuregwu ha mere n’otu abalị. Ihe na-ezighi ezi, mana nke ahụ na-eme ka Tessa gbanwee kpamkpam. Ọ bụ ezie na ya na Hardin nwere ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ọ dị ka ha ka nwere ọtụtụ ihe ha ga-ekekọrịta. Yabụ akụkụ nke mbụ na-egosi anyị otu ha siri zute, ka mmekọrịta ha siri pụta kamakwa ndakpọ olileanya mbụ na nsogbu ezinụlọ.
Mgbe: Na otu puku iberibe
Ka ha na-etolite, akụkọ ọhụrụ na-agbanwekwa. Ugbu a Tessa na-ezube ilekwasị anya na ọmụmụ ihe, n'ihi na ọ bụ ihe ọ chọrọ n'ezie na mkpa ya. Ọ na-enwetakwa ọrụ dị ka onye na-amụ akwụkwọ, ya mere ọ bụ ohere dị mma maka ọdịnihu ya, ọ chọghịkwa ihe ọ bụla ga-egbochi ya. Ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile dị mfe dị ka anyị ga-achọ. N'ihi na n'ọrụ ya, o nwere onye mmekọ nke na-adọtakwa ya, ebe ọ maara na ọ bụ ụdị nke ọ ga-achọ n'akụkụ ya ọ bụghị onye dị ka Hardin. Nke a yiri ka ọ na-egosi ihu ya kachasị njọ ọzọ na ọ bụ na mgbe ị na-echebu na ị nwere nsogbu ụfọdụ, ha na-apụta n'ihu gị. Mana ọ bụ eziokwu na ị nweghị ike ịlụso ịhụnanya ọgụ, ma ọ bụ ikekwe ị nwere ike? Ihe nkiri nke abụọ na saga nke ị nwekwara ike ịhụ na Amazon Prime Ma ọ bụ ezie na ọ nwetabeghị nyocha dị mma, ọ dị ka ọha na eze nwere echiche ọzọ.
Mgbe: Mkpụrụ obi furu efu
Anyị ruru ihe nkiri nke atọ, ma ruo ugbu a ọ bụ nke ikpeazụ anyị nwere iji nwee ike na Amazon Prime. Ebe ọ bụ na ewepụtara nke a na 2021 ma anyị ga-echere ntakịrị ka akụkụ nke anọ bịarute. N'oge a, ọ dị ka mmekọrịta ọnụ na-adị n'etiti ha abụọ na-esi n'ike ruo n'ike. Ma mgbe o yiri ka ọ na-agbakọta dị ka mmekọrịta okenye, nne na nna na ezinụlọ nke onye ọ bụla n'ime ha na-abanye n'egwuregwu. Ya mere, ha ga-aghọta na ma eleghị anya, ha ga-enwe echiche ndị na-abụghị nke ndụ ọzọ, ọbụnakwa na-enwe obi abụọ banyere mmetụta ha, n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe nzuzo ndị ọzọ a ga-ekpughe na fim ahụ dum. Mana ọ ka mma mgbe niile ka ị hụ ya n'onwe gị n'ihi na ọ nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme iji tụgharịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » Mgbe: Saga nke ihe nkiri ịhụ na Amazon Prime
Mmega ahụ a ga-eji ịdị arọ ụkwụ mee ya
Ndepụta Robinson, wepụ oku azụmahịa!